Traditional Beliefs – The Ulwazi Programme
Uma kukhona okuzokwenzeka kuyenzeka uzwe ungatshelwanga muntu ukuthi kukhona into ezokwenzeka noma ezokwehlela. Lelikhasi liveza okunye okuba yinkombisa noma ukubiko okuzokwenzeka. Ukudikiza kwamehlo – Lokho kusho ukuthi uzobona isihlobo okade wagcina ukusibona, kodwa ke lokhu kuhlukene. Njengoba uma kudikiza elobunxele kusuke kubika isifo lokho noma ishobola. Ukulunywa izindlebe – Lokhu kusho ukuthi kukhona abakhuluma ngawe, … Read more